Ma ku firfircoon tahay Eyga Lo'da Australiya? - Taranka
Sidoo kale loo yaqaan Blue Heeler, Australian Heeler, Red Heeler, Halls Heeler, ama Queensland Heeler, eeyga loo yaqaan 'Cattle Dog' waa nooc gaar ah oo caan ku ah jaakad jilicsan.
Iyada oo leh dabeecad shaqo oo adag iyo shakhsiyad madax adag, eeyahaas quruxda badani maaha saaxiibka ugu fiican qof walba.
Sii wad akhriska si aad wax badan uga ogaato eygan eyda markii aan soo bandhigeyno taariikhdooda, daahfureyno shakhsiyaddooda, oo aan ogaanno waxa iyaga ku kallifaya.
Halkee ayuu ka yimid Eyga Ustaraaliya?
Sidee ayuu u eg yahay buluug ama casaan qaali ah?
Eyga lo'da Australiya ma yahay xayawaan qoys fiican?
Daryeelka Eyga Lo'da Australiya
Muddo intee le'eg ayuu Eyga Ustaraaliya noolaa?
Waa imisa qiimaha Blue Heeler?
Isku darka Blue Heelers
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka helitaanka Eyga Lo'da Australia
Noocyo la mid ah Blue Heelers
Sida magacooda ka muuqata, eeyaha Lo'da Australiyaanka ah waxaa lagu horumariyey Australia dabayaaqadii qarnigii 19aad.
Iyaga waxaa abuuray deganeyaal iyo xanaaneeyeyaasha adeegsada eyga si ay u daaqaan xoolahooda , iyo xoolaha kale ee wadaniga ah, iyagoo adeegsanaya qaniinyo iyo nips.
Kabadan kabaha cagaha waxay siinaysaa eeyahaas magacooda kale, Blue Heeler ama Red Heeler.
Eeyahaas adag ayaa door muhiim ah ka qaatay kobcinta warshadaha hilibka lo'da ee dalka.
Eeyaha raaca markii hore laga keenay Boqortooyada Ingiriiska, ee loo yaqaanay Smithfield breed, lama helin inay hor istaagaan xaaladaha adag ee Australia, cimilada daran, iyo masaafada dheer.
Dabeecaddooda ka adkaatay sidoo kale kuma filnayn inay daajiso lo'da duurjoogta ah ee ka baxsan Australia.
Sidaa darteed, eeyaha idaha Kulliyadaha Xuduudaha , iyo Dalmatians ahaayeen lagu kariyey dingo-ka ugaarsiga ah ee Australia si loo horumariyo eey xoog badan.
Kala duwanaansho fara badan oo iskutallaab ah ayaa la tijaabiyay bilowgii, iyada oo isugeynta buluugga ee buluugga ah ee 'Highland Collies' ay muujineyso inay ugu jeceshahay markii laga gudbo doomaha duurka.
Xermooyinka ayaa ku darsaday daacadnimo iyo jacaylka fardaha, iyagoo abuuraya eeyo dhibicyo leh. Qaar ka mid ah, oo ay lahaayeen walaalaha Bagust, waxaa lagu sii tallaabay Kelpies madow iyo tan si loogu daro adkeysi.
Isku darka Australiyaanka Kelpies wuxuu dhaliyay buluug, iyo noocyo casaan ah oo loo yaqaan 'Australian Cattle Dog' oo la abuuray, iyadoo Blue Heelers ay ka caan baxday.
Waxaa la tusay markii ugu horeysay 1897 Robert Kaleski, oo sidoo kale dejiyay heerka isir ee Australiya Heelers, isaga oo u isticmaalaya dingo saldhig ay ka shaqeeyaan.
Heerarkan waxaa ansixiyay 1903 Naadiga Kennel-ka ee New South Wales, iyadoo magaca Australian Heeler uu markii dambe si aad ah loogu yaqaanay Eyga Ustaraaliya.
Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC) wuxuu aqoonsaday isir ahaan 1980, asal ahaan hoosta fasallada kaladuwan, inay xaq u leeyihiin inay muujiyaan kooxda shaqada bishii Sebtember ee sanadkaas.
Bishii Janaayo ee 1983, Eygii Lo'da Australiya waxaa loo raray kooxda xoola-dhaqatada.
Ka eeg Eyga Ustaraaliya ee loo yaqaan 'Loattle Dog' oo ku jira ficil daaqsin muuqaalkan:
Maanta, Buluuga iyo Casaanka Heelers waxay umuuqdaan kuwo aad ula mid ah dingoes duurjoogta ah, iyadoo midabka jaakadu ay tahay farqiga muuqda.
Waxay kala yihiin eeyo is haysta, oo adag, oo deggan , oo leh dhismo la mid ah dingo, laakiin xoogaa ka sii dhumuc weyn oo muruq badan.
Jidhku xoogaa wuu ka dheer yahay sida uu sarreeyo, halka xabadka uu qoto dheer yahay garbahana ballaaran.
Lugaha ayaa ku toosan lugaha wareega oo leh suulasha gaaban. Dabadooda dhaadheer ayaa hoos loo dhigay, iyagoo laalaada qalooc yar.
Qaar ka mid ah eeyaha shaqeeya ayaa sidoo kale dabadooda ku xirnaan doona Mareykanka, in kasta oo dhaqankan laga mamnuucay meelo badan oo adduunka ah.
Waxay leeyihiin madax ballaaran oo xoogaa qaloocsan leh daamanno xoog leh, awood badan, qoorta dhumuc weyn leh, qosol cabsi gelin leh qaniinyo maqas ah, iyo cabir dhexdhexaad ah, dhego toosan oo ballaadhan.
Sanka madow iyo indhaha guluubka madow ee mugdiga ah ayaa dhammaystira muuqaalkooda.
Immisa ayey le'eg yihiin Eeyda Lo'da Australiya?
Eeyaha Lo'da Australiya ayaa hareeraha taagan 17 illaa 20 inji (43 illaa 51 cm) dhaadheer oo ku yaal meesha engegga oo miisaankoodu u dhexeeyo 30 iyo 50 rodol (14 iyo 23 kg) .
Ragga ayaa caadi ahaan u dhexeeya 18 illaa 20 inji (46 illaa 51 cm) , iyadoo dheddigga waxyar uun ka gaaban yihiin 17 illaa 19 inji (43 illaa 48 cm) dherer ahaan
Eeyaha Lo'da Australiya waxaa loo tixgeliyaa inay si buuxda u koraan qiyaastii 18 bilood illaa laba sano jir.
In kasta oo eey cabbirkeedu dhexdhexaad yahay, haddana caynkan adag ee shaqeeya waa oo aan si fiican ugu habbooneyn degganaanshaha guryaha waxayna ubaahantahay beer, xoolo, ama uguyaraan guri leh deyr aamin ah oo ay ku dhex mushaaxi karaan, ku ordi karaan waxna ku sahmin karaan.
In kasta oo ay jecel yihiin inay bannaanka joogaan, eeyahaas u baahan tahay inaad ku noolaato gudaha , gaar ahaan habeenkii, mana wanaagsanaan doono haddii ay ka maqnaadaan qoyskooda muddo dheer.
Si rasmi ah looma aqoonsana Eeyaha Lo'da Australiyaanka ah.
Nooc yar oo ka mid ah noocyadan ayaa marmarka qaarkood la abuuraa iyadoo lagu dhex qasaayo eeyahaas noocyo yaryar, sida Shih Tzu ama Dachshund, ama si joogto ah u tarma.
Si kastaba ha noqotee, eeyahaani waxay la imaan karaan dhibaatooyin caafimaad oo aad u tiro badan waxaana ugu wanaagsan in laga fogaado.
Koodhka Eyga Uurka Ustaraaliya
Queensland Heelers ayaa leh jaakad laba jibbaaran , oo ka kooban jaakad gaaban, cufan oo siman, jaakad dibedda u adkaysta biyaha . Lakabka difaaca ee sare waa mid toosan, oo leh timo dherer dhexdhexaad ah.
Eeyaha Lo'da Australia ayaa soo gala laba nooc oo midabbo leh , oo kala ah Blue Heeler iyo Red Heeler.
Sida magacyadu tilmaamayaan, midab eygan midab buluug ah ama midab madow leh marka laga hadlayo buluugga Heeler ama cirroole casaan ah oo leh tan loogu talagalay noocyada kala duwan ee Red Heeler.
Mararka qaarkood, dharka hoosta ee loo yaqaan 'Blue Heeler dog' wuxuu noqon karaa mid buluug ah oo buluug ah oo leh calaamado maqaarka ah oo ku yaal madaxa, xabadka, daanka, cunaha, iyo lugaha. Blue Heelers waxaa mararka qaarkood loo yaqaanaa inay leeyihiin midab meeris ah.
Dhinaca kale, Red Heeler waa casaan oo dhan, oo leh jaakad casaan ah iyo mararka qaarkood calaamado casaan qoto dheer oo ugu horreeya madaxa. Eeyahaas waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa eeyaha lo'da 'brindle ama brown'.
Labada eeyba, dhejisyo yaryar iyo buluug ama casaan cas ayaa si siman loogu qaybiyaa jaakad u badan cad. Calaamadaha madow ee madow looma rabo eeyaha show.
Way adkaan kartaa inaad u sheegto midabka Eyda Lo'da ee Australia sida eyyo maxaa yeelay eeyahaani waa ku dhashay cad cad, iyadoon loo eegin inay yihiin noocyada buluugga ah ama casaanka ah.
Tani waa astaamo laga dhaxlay Saameynta Saldhigga. Midabka mararka qaarkood waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo la fiirinayo suufka suulashadooda.
Midabka dhabta ah eeygu wuxuu bilaabmi doonaa oo keliya inuu soo baxo marka Eygaaga Cattle ee Australia uu gaaro qiyaastii afar toddobaad.
In kastoo aad u daacad ah oo daacad ah qoysaskooda, Eyda Australiyaanka ah kama doortaan eeyaha ugu fiican qoysaska leh carruurta yaryar.
Noocani wuxuu u egyahay isku dheji hal qof aadna looga digtoonaan karo dadka dibedda jooga.
Waxaa mararka qaarkood loo yaqaanaa eey velcro sababtoo ah dabeecadooda inay ku dhagan yihiin hal qof marwalba wayna necbaan doonaan in laga fogeeyo qofkaas waqti dheer.
Natiija ahaan, wax fiican ma qabanayaan marka keligood layska tago muddo aad u dheer waxayna u adeegsan karaan dabeecado halaag ah, sida qodista iyo calalinta.
Waxay sidoo kale jecel yihiin biyaha waxayna leeyihiin u janjeera inay dabaashaan, badiyaa waxay ku quusaan barkadda inaad jeceshahay iyo haddii kaleba.
Waxay kaloo noqon karaan tuhunsan carruurta yaa loo arki karaa inay tahay hanjabaad maxaa yeelay waxay ku dhaqmaan si kadis ah waxayna soo bandhigaan dabeecado aan la saadaalin karin.
Natiijo ahaan, dabeecaddan dhaqameed ee dabeecadda ah iyo dabeecadda nipping ayaa inta badan loogu talagalay carruurta iyo xayawaanka yaryar ee xayawaanka ah.
Ey af badan, way nuugi doonaan xitaa way qaniini doonaan marka ay ciyaarayaan waxayna aad ugu dhib badnaan karaan carruurta iyo xayawaannada kale.
Kuwa ay xoog ugaadhsade sidoo kale waxay ka dhigan tahay inay si gaar ah ula dhici doonaan bisadaha, dabagalayaasha, iyo bakaylaha.
Taasi waxay tiri, Eyda Ustaraaliya si wanaagsan ayey ula qabsan karaan eeyaha kale haddii loo soo bandhigo sida ey.
Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqdaan inay ka hinaasayaan qofka ay doorteen haddii eey kale lagu qubeysto fiiro gaar ah.
Dabeecaddan shaqeynta, qaabka xoolo raacista, iyo milicsiga milkiilaha ayaa ka dhigay noockan eeyga ah mid caan ku ah beeraleyda. Waxay sidoo kale ku shaqeeyaan aamusnaan mana u muuqdaan inay qayliyaan, sida eeyaha duurjoogta ah.
Si kastaba ha noqotee, heerarkooda sare ee tamarta waxay u baahan yihiin in la daryeelo si looga hortago caajiska ka soo gurguurta. Sidoo kale, dabeecaddooda caqliga badan, ee ku talagalka ah u baahan tahay tababar joogto ah si loo xakameeyo.
Eyda Lo'da Australiya ma yihiin kuwa gardarro badan?
Noocani daacadnimadiisa milkiilaha adag ayaa iyaga ka dhiga iyaga ilaalada ilaalinta ; hase yeeshe, sidaan soo sheegnay, ha ka fileynin in noocani uu ciyi doono.
Iyaga noqon kara mid dagaal badan eyda kale, shisheeyaha iyo tababar adag ayaa looga baahan doonaa eeyaha si loo xakameeyo oo si sax ah loogu sii daayo dabeecadahaas.
Haddii Eyga Ustaraaliya loo oggol yahay inuu noqdo hoggaamiye kooxeed, markaa dabeecadooda gardarrada ah, ee awoodda leh ayaa la wareegi karta, taasoo u horseedi doonta inay la dagaallamaan eeyaha kale.
Waad ku mahadsan tahay, noocani waa mid aad u fudud in la tababaro; si kastaba ha noqotee, qaab lahaansho adag oo xoog leh ayaa loo baahan doonaa.
Tababbarka wanaagsan eeyahaas 'waxaa u sabab ah taariikhdooda dheer ee loo adeegsaday eeyo ka shaqeeya seeraha.
Maaddaama eyda lo'da Australiyaanka ah si gaar ah loo soo saaray si ay isaga caabbiyaan dhulka adag ee Australia iyo heerkulka sarreeya, waxay yihiin eeyo aan caadi aheyn oo dulqaad badan .
Waxay kala yihiin si fiican ugu habboon cimilo kasta , xitaa heerkulka qabow, waxay ku mahadsantahay labbiska labiska ee ilaaliya.
Natiijo ahaan, Eyga Ustaraaliya ee loo yaqaan 'Loattle Dog' ma aha nooc ka mid ah baahiyaha dayactirka sare. Dabeecaddooda xoogga badan ee diirada saareysaa waxay ku keentaa inay shaqada sii wadaan xitaa haddii xanuun ama dhaawac ama qabow aad u daran dareemayo.
Markaa waxaad u baahan tahay inaad taxaddar sameyso markaad daryeeleyso oo aad daryeeleyso tarankaan.
Calaamadaha lagu garto in eeygaagu la halgamayo waxaa ka mid ah ruxitaanka, gariir, gariir, cabaad, iyo dabada oo gunta jirka hoostiisa iyo cagaha oo dhulka ka qaada.
Sideen mashquul ugu ahaadaa Eygeyga Lo'da Australiyaanka ah?
Tani xoolo dhaqashada sare baraaraan marka shaqo la siiyo waxayna ubaahantahay ciyaaro badan iyo jimicsi si madadaalo loogu yeesho.
Ka sokow waxqabadyada daaqsin ee muuqda, eeyadan sidoo kale waxay jecel yihiin inay ordaan oo ay qabtaan waxqabadyo halka ay ka garab shaqeeyaan milkiilaha ay aadka u jecel yihiin, sida firfircoonida, isboortiga eyga, adeecida, isu soo baxa, frisbee, iyo kubbadda cagta
Waxay sameeyaan saaxiibo fiican oo loogu talagalay orodyahanada iyo socodka oo u baahan socod dheer ama orod maalin kasta. Waxay ku xeel dheer yihiin safridda masaafada dheer iyagoon daalin.
Markaad ku socoto waddooyinka, hubi inaad waligaa u oggolaan Heeler-kaaga inuu ku hor maro. Adoo ku qasbaya eeygaaga inuu ku ag socdo ama gadaashaada, waxaad ku xoojin doontaa inaad tahay alfa ee xirmada.
Haddii la siiyo jimicsi maalinle ah oo ku filan ama ugu yaraan hal ilaa laba saacadood maalin kasta, noocani wuxuu ku qanacsan yahay inuu jiifo sariirtiisa ama santuuqa oo uusan soo bandhigi doonin u janjeersanaan xagga dhaqdhaqaaqa ah.
In kasta oo dhagaha dhagta leh ay had iyo jeer ka feejignaan doonaan wax kasta oo aan caadi ahayn oo socda.
Immisa cunto ah ayaa ah inaan ku quudiyo Eygeyga 'Cattle Australia'?
Heerarka sare ee tamarta iyo dabeecadaha firfircoon awgood, Australian Heelers waxay u baahan yihiin cunn eyga oo ay ka buuxaan nafaqooyin iyo fiitamiino si loogu kabo murqaha iyo maskaxda.
Raadi cunnada eyga halka ay ka kooban tahay borotiinka , sida hilibka lo'da, digaagga, iyo kalluunka. Badarka iyo khudaarta waa in lagu qoraa sida maaddooyinka xiga ee cuntada aad doorato.
Kibble qalalan ayaa kaa caawin doona nadiifinta cuntadooda iyo ciridka, laakiin waxaad ogaan kartaa in eeygaagu sii gaboobayo, kibibbadoodda ayaa loo baahan yahay in la qoyo ama loo baahan yahay in loo wareejiyo cuntada qasacadaysan, taas oo ka fudud habka dheef-shiidka.
KU qadarka lagu taliyay ee ah 1.5 ilaa 2.5 koob cuntada eyga waa in la siiyaa eeygaaga maalin kasta, u kala qaad laba cunto.
Noocan ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu ka faa'iideysto kaabayaasha sida glucosamine , kaasoo kobciya kala-goysyada caafimaadka qaba.
Miyuu Blue Heelers daadiyaa?
In kasta oo Eyga Ustaraaliya ma aha daadinta xad dhaafka ah , waxay u muuqdaan inay afuufaan jaakadooda hal mar ama laba jeer sanadkii iyadoo xilliyada isbeddelayaan. Inta lagu jiro waqtigan, waxay timaha ku daadin doonaan buro.
Inkasta oo jaakadu guud ahaan aysan u baahnayn dayactir badan, cadayashada burush adag oo adag isbuuciiba mar wuxuu eeygaaga ka ilaalin doonaa nadiif iyo wasakh la'aan.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad si joogto ah u cadaydo inta lagu jiro muddooyinka daadinta culus si looga saaro timahaas xad-dhaafka ah ee dhintay. Cunug guud ahaan nadiif ah oo hagaagsan, Eyga Lo'da Australiya sidoo kale ma quusto.
Qubeyska waxaa loo baahan yahay oo keliya markii loo baahdo, laakiin waa in ilkaha la cadaydo ugu yaraan laba jeer usbuucii si looga hortago inay ku soo baxaan dhagxan.
Sidoo kale, isku day oo iska jar cidiyahaaga eey ciddiyaha bil kasta haddii aysan si dabiici ah u xirin, oo fiiri dhagaha toddobaad kasta wixii ur ama casaan ah, taas oo noqon karta calaamadda infekshanka.
Celceliska cimriga Eyga Lo'da Australia waa inta udhaxeysa 12 iyo 16 sano . A Blue Heeler hadda wuxuu hayaa cinwaanka ah eyga ugu da'da weyn Buugga Guinness ee Diiwaanada Adduunka . Bluey wuxuu noolaa da 'weyn oo da' weyn oo 29.5 jir ah.
Markaad heleyso eey Australian Heeler ah, waa inaad filaa inaad aragto nadiifinta sinta iyo xusulka dysplasia, cudurka von Willebrand, iyo hypothyroidism oo ka socda Orthopedic Foundation for Animals (OFA).
Nadiifin caafimaad oo cadeynaysa indhaha eeyga waa caadi waa la filan karaa, sidoo kale tijaabada thrombopathia ee ka socota Jaamacadda Auburn. Shahaadooyinkan waa la hubin karaa kahor intaadan iibsan eey Websiteka OFA .
Sida awood badan, eeyaha isboortiga, Australian Heelers waxay ku xiran yihiin dad badan cudurada saameeya kala-goysyada iyo xididdada .
Oo ay weheliso dysplasia sinta, oo u horseedi kara xanuun iyo laalaab, hal dhibaato caafimaad oo caadi ah oo saameyn ku yeelan karta Eygaaga 'Australian Cattle Dog' waa Horusocod Retinal Atrophy (PRA). Cudurkaan indhaha ku dhaca wuxuu keenaa in xubinta dambe ee isha ay sii xumaadaan.
Dhago la'aantu sidoo kale waa ku badan tahay tarankaan; si kastaba ha noqotee, tan waa la tijaabin karaa marka eeygaagu eey yahay, eeyooyinka dhagaha la 'waligoodna weligood lama daajin karo.
Ey Ey Ey ah oo Australian ah oo nadiif ah ayaa kara wax kasta oo kaaga baxa $ 250 illaa $ 1,100 , waxay kuxirantahay abtirsiinta waalidka, abuurka, goobta, iwm.
Xajmiga qashinka ayaa sida caadiga ah ka kooban inta u dhexeysa hal iyo laba eey, celcelis ahaan shan eey.
Marka lagu daro kharashka iibsashada Buluug ama Casaan Heeler, waa inaad sidoo kale miisaaniyad ku bixisaa kharashyada caafimaad ee sannadlaha ah, sida daawooyinka, booqashooyinka xoolaha, iyo goynta dhirta, oo wadartoodu noqon karto $ 600 illaa $ 800 sannad kasta.
Kalkaaliyeyaasha Eyga Ustaraaliya
Inkasta oo eeyadan badanaa loo soocay sida eeyaha xoolaha, waxaad u muuqan kartaa inaad ku hesho iyaga oo ku socda qiimo macquul ah oo ka yimaada kuwa aan diiwaangashanayn.
Si kastaba ha noqotee, marwalba samee shaqada gurigaaga si aad u hubiso xaaladaha taranka, caafimaadka waalidiinta, iyo taariikhda caafimaadka kahor intaadan iibsan Ey Ey Ey Australian ah.
Naadiga Eyga ee loo yaqaan 'Australian Cattle Dog Club of America' wuxuu leeyahay koodh anshax oo ku saabsan kuwa soosaara iyo liis-gareyaal caan ku ah boggooda .
Waa kuwan qaar ka mid ah soosaarayaasha Eyga ee Australiyaanka ah si ay kuugu bilaabaan raadintaada cunugga ugu habboon:
Sonkorta N Spice eeyaha lo'da Australia , Goodyear, Arizona
ACD-yada Birta ah , Waddell, Arizona
Adams Ranch ACDs , Phelan, Kaliforniya
Badbaadinta Eyga Australiya / si loo korsado
Eyda Ustaraaliya waxaa mararka qaar iibsada milkiileyaal aan aqoon shakhsiyadda adag ee halganka kula leh mid. Sidaa darteed waxaad mararka qaarkood ka heli kartaa mid laga heli karo samatabbixin ama hoy.
Waxaa jira kooxo kooxo badan oo badbaadiya Eyga Australia oo aad ka raadin karto eey raadinaya guri jecel.
The Australian Lo'da Samatabbixinta Inc waa mid ka mid ah ururada noocan oo kale ah oo bixiya xiriirinta ururada samatabbixinta isla markaana ku dhejiya eeyaha jira boggooda Facebook .
Waxa kale oo aad isku dayi kartaa inaad raadiso Buluug Heeler ah oo kor loogu qaadayo bogaggaan:
Badbaadinta Eyga Texas , Texas
Kooxda Badbaadinta Eyga Ohio , Ohio
Carolina ACD Samatabbixin iyo Soo Celin , Carolina
Qaar ka mid ah isku darka eyda Australiyaanka ah ayaa maanta socda.
Ka gudubka Blue Heeler ama Red Heeler oo leh nooc kale waxay ku dhalin kartaa eey leh midab gaar ah, midab qurux badan oo ka mid ah noocyadan laakiin leh nooc kale oo dabeecad eey ah, iyaga oo ka dhigaya iyaga wehel wanaagsan.
Qaar ka mid ah iskudhafka buluugga ugu caansan waxaa ka mid ah Corgi Heeler, Beagle Heeler, Box Heeler, iyo Blue Cocker Spaniel. Aynu si dhow u eegno qaar ka mid ah waxyaabaha kale ee isku dhafan ee loo yaqaan 'Australian Cattle Dog':
Isku darka Bull Blue Heeler
La kulan Kroki, Pit Heeler (Pit Bull Blue Heeler mix) - Isha sawirka
Godka Heeler waa kala badh Blue Heeler iyo badh American Pit Bull Terrier.
Noocan murqaha iyo xoogga leh wuxuu ku koraa agagaarka 24 inji (61 cm) dherer ahaan oo leh muuqaal cabsi gelin leh oo ka dhigaya iyaga ilaaliyayaal cajiib ah.
Sida taranka firfircoonida, Pit Heeler wuxuu ubaahan yahay jimicsi iyo tababar badan. Iyagu sidoo kale waa eeyo aad iyo aad u heellan oo ka doonaya bini aadamka.
Isku darka Siberia Husky Blue Heeler
La kulan Bear, Ausky (Siberian Husky Blue Heeler mix) - Isha sawirka
Ka gudub Eyga Ustaraaliya ee leh Siberian Husky, waxaadna heli doontaa nooc firfircoon oo wata xoolo ugaarsi xoog leh.
Sidoo kale loo yaqaan Ausky, eeyani waxay u egtahay inay baacsato carruurta iyo xayawaannada yaryar waxayna u baahan tahay tababaro badan iyo is dhexgal si looga ilaaliyo inay xakameeyaan.
Isku-darka Jarmalka Shepherd Blue Heeler
La kulan Liesel, Iskuduwaha Jarmalka Shepherd Blue Heeler - Isha sawirka
Nooc awood badan, oo ah 'German Shepherd Australian Cattle Dog mix', ayaa ku kori kara hareeraha 25 inji (64 cm) dheer iyo miisaan u dhexeeya 30 iyo 95 rodol (14 iyo 43 kg) .
Maaddaama ay yihiin nooc caan ah oo leh dabeecad ilaalin ah, waxay u sameeyaan eeyo ilaaliya oo aad u fiican laakiin kuma fiicna milkiilayaasha xayawaanka cusub.
Noocani wuxuu sidoo kale u nugul yahay daadinta xad-dhaafka ah ee baahiyaha is-qurxin ee aadka u daran, iyada oo ay ugu wacan tahay jaantuskooda adag ee labiska ah.
In kastoo laga yaabo inay u muuqdaan kuwo qurux badan, Eeyaha Lo'da Australiya ayaa ah oo aan ku habboonayn milkiilayaasha xayawaanka markii ugu horraysay iyo qofkasta oo ku nool guri dabaq ah.
Noocani wuxuu ubaahan yahay kicitaan badan oo jireed iyo maskaxeed wuxuuna soo bandhigi karaa dabeecado gardaro ah ama wax burburiya oo aan lahayn tababar iyo feejignaan sax ah.
Taasi waxay tidhi, milkiileyaasha beeraha ama shaqsiyaadka firfircoon waxay jeclaan doonaan noocan u gaarka ah daacadnimada, dabeecadda ilaalinta, iyo tamarta firfircoon.
Dhawr nooc oo isku mid ah ayaa laga heli karaa kuwaas oo u eg Eygii 'Lo'da Australiyaanka ah muuqaal ahaan isla markaana leh astaamo isku mid ah shakhsiyadeed.
Fiiri noocyadan si aad u ogaato qaar ka mid ah isku ekaanshaha iyo faraqa u dhexeeya eeyahaas iyo Blue Heeler:
Reer Biljim Belgian
Maxay yihiin noocyada eyda ugu caansan Japan?
tiger stripe pitbull sawiro
xuduud collie Jarmal Shepherd isku darka puppy
muxuu u eg yahay isku dhafka shaybaadhka adhijirka jarmalka
magacyada eey dheddigga wanaagsan ee pitbulls
Siberian husky magacyada ragga
qayb shaybaadhka qayb Jarmal adhijir